Tonga soa eto amin'ny Manohina nitendry ny Fianarana!
Moa ve mbola nitendry tamin'ny rantsan-roa? No mbola mila mijery ny Keyboard eo anoloan'ny keystroke rehetra?
Ny fianarana mitendry Touch dia maimaim-poana, mpampiasa tranonkala fianarana-namana fa dia natao mba hanampiana anao hianatra, fampiharana ary hanatsara ny any vao soratany haingana sy araka ny marina.
Raha vao afaka mikasika karazany dia tsy mila mijery ny Keyboard mba hitady ireo taratasy tianao nitendry milina fanoratana, ary ianao koa ho afaka nitendry haingana be amin'ny hafainganam-pandeha!
Touch any vao soratany dia mifototra amin'ny hozatra fomba fitadidiana fa tsy nahita. Ity fomba ity dia mamela anao hanatratra ny hafainganam-pandeha ambony be ny angona fidirana, indrindra fa raha toa ka mila hanoratra lahatsoratra avy ny sary hafa.
Nitendry amin'ny fomba any vao soratany ny mikasika ny solosaina be kokoa pamokarana; izany dia mampitombo ny hafainganan'ny sy angona teny, izay azo atao, mampihena ny harerahana sy ny ratra ny maso.
Fianarana nitendry Touch 15 ahitana lesona, ny hafainganam-pandeha sy ny lalao fitsapana avy izay afaka mianatra dingana nitendry milina fanoratana-by-dingana, hanara-maso ny ny fandrosoana sy miala voly!